स्मृतिः मैले गुमाएको त्यो प्रेम - ग्लोबलपाटी
स्मृतिः मैले गुमाएको त्यो प्रेम
सुभद्रा ढकालप्रकाशित मिति: २०७८ आश्विन २६, मंगलबार (२ हफ्ता अघि)
त्यस दिनको क्लास निकै पट्यारलाग्दो भयो । बालकृष्ण समको मुटुको व्यथा पढाउँदा मैले धेरै ठाउँमा आफूलाई रोक्न सकिनँ । म कताकता आफ्नै विगतमा भासिन पुगेँ । जिन्दगीमा आफूले गरेको निर्णय आफैँमाथि प्रहार भयो । घर फर्किदा बाटामा अनेकथरि तर्कना आए । मैले मेरो प्रेमलाई सम्मान गर्न सकेको भए आफन्त र परिवारभन्दा माथि उठेर आफ्नो पक्षमा उभिएर अडान लिएर निर्णय गरेको भए मेरो दुनियाँ र जीवनका रंग नै बेग्लै हुने थियो ।
जिन्दगीले मलाई नयाँ पाठ सिकाएको छ । आफू खुसी भए मात्रै परिवार, आफन्त र दुनियाँलाई खुसी बनाउन सकिने रहेछ । घरमा पुगेँ । चिसो पानी घटघट पिएर खाटमा पल्टिएँ । पल्लो कोठामा छोरी रुँदै थिई । घरमा काम गर्ने दिदीले छोरीलाई फुल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो । किनकिन मलाई छोरीको कोठामा पनि पस्न मन लागेन ।
एउटा आर्टिकल इडिट गर्नु थियो । ल्यापटप खोलेर इमेल हेर्दै थिएँ । प्रकाशको नाममा नयाँ इमेल आएको रहेछ । म कलेजको सबैभन्दा स्ट्रोङ नारीमा गनिन्छु तर प्रकाशको नाम सुन्नेबित्तिकै म सबैभन्दा कमजोर किन भए ? आफैंले पत्तो पाउन सकिनँ । जिन्दगी आफ्नै लयमा चलिरहेको बेला । मलाई उसको मेलले फेरि एकपटक सोच्न बाध्य बनायो ।
के लेखेको होला उसले मेलमा ? आफ्नो जिन्दगीको व्यथा होला कि हाम्रो प्रेमकथा ? खुसीको कहानी कि दुःखको सन्देश ? हे भगवान् उसले मेलमा लेखेको होस् कि मैले विगतका सबै कुरा भुलिसकेँ गुन्जन । मलाई केही कुरा याद छैन । धेरै पटक विचलित भएर उसको इमेल पढ्न थालेँ । डियर गुन्जन,
म हिजो साँझ काठमाडौँ आइपुगेँ । तिमीलाई जुन रुपमा छोडेर जापान गएको थिएँ । पक्कै त्यही रूपमा छ्यौ होली ? उता जानुअघिको वाचा पनि पक्कै भुलेकी छैनौँ होला ? मलाई अझै तिम्रा थोपाथोपा आँसुको सम्झना छ । म उड्ने साँझ तिमी खुब रोएकी थियौ । मलाई थाहा थिएन । तिमी यति भावुक हुन्छौ ।
मैले मन पराएकी गुन्जन त्यति कमजोरी होली भनेर मैले त कल्पनै गरेको थिइनँ । त्यसबेला मेरो मनले सोचेकी तिमी र वास्तविक तिमीमा मैले निकै अन्तर पाएको थिएँ। तिम्रो आँसु देख्दा मलाई लागेको थियो, यो पासपोर्ट र टिकट तुरुन्तै च्यातिदिम् र तिम्रो अँगालोमा बेरिएर बसूँ । तिमीसँग विवाह गरूँ । तर मेरो अगाडि परिवारको भविष्य जोडिएको थियो । तिमीलाई पनि सुख दिनु थियो । सम्पन्न बनेर छिट्टै नेपाल आउँछु र तिमीसँग रमाउँछु, सोचेथेँ ।
व्यस्त दिनचर्याले तिमीसँग नियमित कुरा हुन पाएन । जसको कारण मैले तिमीलाई जिन्दगीभरिको लागि गुमाउनुप¥यो । पछि साथीबाट सुनेँ, तिमीले त विवाह पो गरेछौ हैन ? आफ्नो मान्छेको सुखद समाचार अरूबाट सुन्दा निकै दुखेँ । केही हप्ता नरमाइलो लाग्यो। मेरो सेकेन्ड सेमेस्टरको इक्जामै बिग्रियो ।
एक मनमा लाग्यो, नेपाल जाऊँ । अर्को मनले भन्यो, कसैको खुसीमा हस्तक्षेप गर्नु उचित हुँदैन । तिमी बेहुली भएको हेर्ने ठुलो रहर थियो । फेसबुकमा तिम्रो फोटो सर्च गरेर हेरेँ । तिमी फोटोमा निकै खुसी थियौ । तिम्रो मनमा के थियो म जान्दिनँ । फोटो देखेर अनुमान लगाएँ, तिमी निकै खुसी छ्यौ । तिमी खुसी छ्यौ भने मैले मन सानो बनाउनु हुँदैन भनेर आफैँलाई धेरै पटक सम्झाएँ । तिमीलाई सफलताको कामना गर्दै म करिअर फोकस हुन थालेँ ।’
कति निश्छल मुटु ! प्रकाशको मेल पढ्दापढ्दै भक्कानो फुट्यो । मैले पनि उसको खुसीका लागि आफ्ना बाध्यताहरू सुनाउन नचाहेकी थिएँ । मभित्रको म कति दुखी छ भनेर म उसलाई आभाससमेत हुन दिने छैन ।
डियर गुन्जन, प्रेम र विवाह अलग पाटा हुन् । यस्तै सोचेर म तिमीलाई भुल्न विवश भएकी थिएँ । यसपटक तिम्रो र घरको निकै याद आयो । त्यसकारण केही नसोची म नेपाल आएँ । चार वर्षपछि आफ्नै देश टेक्न पाउँदा खुसी लाग्यो । फेरि अर्को मनले तिमीलाई सम्झियो, पराईको आँगन टेकेकी तिमी कस्ती भयौ हौली ? तिमीलाई एक झलक देख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने रहरले दिमागलाई जित्यो । त्यसकारण यो इमेल लेख्ने निर्णय गरेँ ।
साँझमा राजधानीका झलमल्ल उज्यालो तर मेरो मनको अँध्यारो बस्तीमा लुकेकी तिमीलाई धेरैपटक फोन गर्ने कोसिस गरेँ । किनकिन नम्बर डायल गर्नुभन्दा अगाडि निकै पटक हात काम्यो । हुनसक्छ यो पनि मैले तिमीलाई गरेको अथाह प्रेम हो । तिमीले प्रेमबारे बेग्लै तर्क गर्न सक्छ्यौ । अँ साँच्चि, तिमी त लेक्चर मान्छे । तिमीले आफ्ना विद्यार्थीलाई बुझाउने तरिका अलि फरक पनि होला ? मैले तिम्रा हरेक आँसुलाई मुटुमा राखेर तिम्रै सपना पूरा गर्न निरन्तर काम गरेको थिएँ तर अहिले समानान्तर रेखाका दुई लाइन हुन विवश भयौँ । भो छोडिदेऊ यी विगतका कहालीलाग्दा दिनहरू । अब हाम्रो मिलन सम्भव छैन ।
तिम्रो वैवाहिक जिन्दगीलाई म कुनै पनि असर पु¥याउन चाहन्नँ । एकपटक तिमीलाई भेट्ने मात्र इच्छा छ । अर्को महिना म जापन फर्कन्छु होला । फर्कनु अगाडि तिमीसँग अन्तिम पटक भेट्ने रहर छ । भोलि दिउँसो दुई बजे नयाँ वानेश्वरको आराधना क्याफेमा तिम्रो प्रतीक्षामा हुनेछु ।
उसको मेलको आशयले नर्भस भएँ । जिन्दगीले कस्तो मोडमा ल्याएर छोडिदियो । त्यसपछि मेरा हातगोडा चिसा भए । केही केही सोच्न सकिनँ। पारिवारिक जञ्जालमा बाँधिएकी थिए । त्यसकारण आफ्नो कर्तव्यका लागि मात्र मैले आफूलाई सम्हालिरहेँ ।
श्रीमान् आएर बेलुका खान खाने खाएर कोठामा जानुभयो । मलाई टाउको नै फुट्ला जस्तो ज्वरो आयो तर उहाँले मेरो स्वाथ्यबारे एक शब्द पनि सोध्नुभए । हुन त हाम्रो ओछ्यान एउटै छ । हजारपटक शरीर पनि साटिएको छ तर अफसोच चार वर्षको अवधिमा हाम्रो मन साटिएको छैन । म यो विवाहलाई सम्झौताभन्दा माथि राखेर हेर्न सक्दिनँ ।
म हरेक रात यसैगरी तड्पन्छु, छट्पन्छु तर उहाँले के भयो भनेर एकपटक पनि सोधेको याद छैन । यदि उहाँको ठाउँमा प्रकाश भैदिएको भए म उसको छातीमा टाँसिएर कति रुन्थेँ होला ? एकपटक पाउने जिन्दगी पनि किन म मरीमरी बाँचेकी छु । मनमा आँधी चले पनि समय उही गतिमा चलेको छ । म यो पीडाको आभास कसैलाई पनि हुन दिन्नँ । मैले यसलाई छातीभित्र नै लुकाउनुपर्ने छ । दुनियाँका लागि मुस्कुराउनुपर्नेछ ।
मलाई रातभर निद्रा लाग्दैन । विगतका सम्झना आँखाभरि आउँछन् । कस्तो भयो होला प्रकाश ? निकै समय भयो उसलाई नदेखेको। उसलाई लाग्दो होला मैले उसलाई धोका दिएँ तर उसलाई मैले कसरी विश्वास दिलाऊँ, यो धोका नियतिले दिएको हो । म घर र समाजको मर्यादाभित्र हराएर उसलाई बिर्सेजस्तो गर्न पुगेकी हुँ तर कुनै पनि रात नहोला मैले उसलाई बिर्सेर निदाएको । कुनै सपना छैन उसलाई नदेखेको। कुनै पल छैन उसलाई बेवास्ता गरेको तर मैले उसलाई यी कुनै पनि कुराको आभास कहाँ होला र ?
जिन्दगीभरि उसलाई मेरो बाध्यताको आभास नहोस् भन्ने चाहन्छु म पनि । मलाई त्यो बिहान छटपटी मात्रै भइरह्यो । कति बेला दुई बज्ला र प्रकाशसँग भेट होला भनेर छटपटाइरहेँ । कोटेश्वरबाट नेपाल यतायात चढेँ । बानेश्वर चोकमा पुगेर उसले मेलमा छोडिदिएको नम्बरमा फोन लगाएँ ।
ऊ त अघि नै आएर मलाई पर्खिरहेको रहेछ । उसको अगाडि पुग्नुपहिले म निकै नर्मस भइसकेकी थिएँ । मनमा धेरै तर्कना आए । कस्तो भयो होला प्रकाश ? कसरी बितायो होला विदेशमा चार वर्ष । म कसरी सम्हालिन्छु होला, उसलाई भेटेपछि। हे भगवान् ! यो कस्तो परीक्षा लिँदै छ मेरो जिन्दगीले ।
किन धोका दियौ भनेर सोध्यो भने म के जवाफ दिउँला ? मैले जानेर उसलाई धोका दिएकी हैन । म परिबन्दमा परेकी हुँ तर मैले उसलाई मेरो दुख नसुनाउने र सुखको मात्रै कुरा गर्ने निर्णय गरेँ । उसको अगाडि पुगेर म मूर्ति जसरी उभिएँ । उसको अनुहार र कपाल देखेपछि आँखाबाट ताता आँसुका थोपा बगे। मैले मुस्किलले रोकेँ ।
झुस्स पारेको दारी । वर्षौदेखि नकाटेजस्तो कपाल चैत मासको खडेरी जस्तो उदास जिन्दगी । उसले मलाई एकनास हेरी मात्रै रह्यो । उसले मलाई केही कुरा सोधेन । मैले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिइरह्यो । उसलाई नसोधीकन कफी अर्डर गरेँ ।
हामी दुवै मौनतासँगै कफीको प्रतिक्षामा बसिरह्यौँ। मलाई उसँग धेरै बोल्न मन थियो । मन भरिने गरी हेर्ने रहर थियो । उसको काखमा घोप्टिएर रुने रहर जिउँदो भएर उभियो । टेबुलमा आइपुगेको कफी पिउँदै आफ्नो हातबाट ब्रासलेट झिकेर मेरो हातमा राखिदिदैँ वैवाहिक जीवनको शुभकामना दियो ।
म जिन्दगीमा अन्तिम पटक प्रकाशसँग पोखिन चाहान्थेँ । अपसोच श्रीमानको फोनले तुरुन्तै घर फर्कन आदेश आयो । बाफ आइहेको कफी छोडेर हिँड्दा नरमाइलो लाग्यो । म निस्कन लाग्दा उसका आँखाको वर्षात् देखेँ । आफूलाई सम्हाल्नुको विकल्प थिएन । यदि मैले समयमा नै आफ्नो जिन्दगीको सही निर्णय गर्न सकेको भए…
कविताः शुभकामना दसैँको
कविताः एउटा नोटको जीवनी
कविताः समय भर्सेस दशैँ
जितेन्द्रको बालकथा सङ्ग्रह ‘गुलेली’ बजारमा